Tag: Xildhibaan | Sagal Radio Services
Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka oo caawa ka bad baaday isku day dil
Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya oo lagu magacaabo Malaaq Ibraahim Aadan Dhaayow ayaa caawa fiidkii ka bad baaday weerar kooxo hubeysan ku qaadeen gurigiisa oo ku yaala degmada Hodan.
Xildhibaan Goodax “Madaxweynaha wuxuu laaluush ku bixiyay kala qeybinta qabaa’ilka Hiiraan”
Sagal Radio Services • News Report • March 28, 2016
Wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha ahna Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka C/llaahi Goodax Barre ayaa ku eedeeyay Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu kala qeybiyay qabaa’ilka dega Gobolka Hiiraan, kadib markii qaar ka mid ah Odayaasha dhaqanka gobolka ay aqbaleen inay shirka Jowhar ka qeyb galaan.
Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka oo goor dhow lagu dhaawacay Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • November 7, 2015
Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa goor dhoweyd lagu dhaawacay agagaarka bacadlihii hore ee degmada Xamar weyne.
Sagal Radio Services • News Report • September 26, 2015
Xildhibaan Dahir Amiin Jeesow ayaa ka hor-yimid doorashada Madaxweynaha Jubbaland oo maalinta berri ka dhici doonta magaalada Kismaayo, isagoo tilmaamay inay tahay mid sharci darro ah oo shacabka lagu qaldayo.
Xildhibaan Shiiraar “Xarigeyga wax lug ah kuma lahan Faarax C/qaadir, warka la iga baahiyay waa been abuur”
Xildhibaan C/raxmaan Ibraahim Cali (Shiiraar) oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa si kulul u beeniyay war lagu daabacay shabakad ka mid ah kuwa Soomaalida, taasoo lagu sheegay in xarigga xildhibaanka uu ka dambeeyay wasiirka cadaalada iyo arrimaha dastsuurka xukuumadda Soomaaliya.
Xildhibaan ka tirsan Puntland oo Laascaanood ku geeriyoodey
Sagal Radio Services • News Report • April 23, 2013
Waxaa shalay magaaladda Laascaanood ee xarunta Gobolka Sool lagu aasay Caydiid Maxamed Cismaan (Caydiid Casoowe) oo xildhibaan ka ahaa Maamulka Puntland, horeyna uga mid noqday xildhibaanadda dawladda Soomaaliyeed ee lagu soo dhisi jirey magaaladda Carta ee wadanka Jabuuti.
Dr. Dufle oo xildhibaannimada kala wareegay Md. Tarsan
Sagal Radio Services • News Report • November 13, 2012
Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Md. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, ayaa maanta sheegay in booskii xildhibaannimo ee Md. Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan) oo ah guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho lagu badalay Professor Cismaan Xaaji Maxamuud Nuur (Dufle).
Xildhibaan caawa Muqdisho lagu dilay
Sagal Radio Services • News Report • September 22, 2012
Kooxo hubeysan, ayaa caawa fiidkii magaalada Muqdisho ku dilay ALLAHA u Raxmadee Xildhibaan Marxuum Mustaf Xaaji Maxamed, oo ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaanka dalka Soomaaliya.